दसैँमा रिलिज होला नयाँ फिल्म ? - Prabhav Khabar
दसैँमा रिलिज होला नयाँ फिल्म ?
काठमाडौं– हिन्दू नेपालीहरूको महान चाडमध्ये दशैं प्रमुख चाड हो । दशैंमा अन्यभन्दा अलि लामो बिदा हुने, टाढाका आफन्त घर आउने र रमाइलो वातावरण बन्ने गर्दछ । त्यसैले दशैंको छेको पारेर फिल्म रिलिज गर्नका लागि निर्माता, निर्देशकहरू न्वारानदेखिको बल लगाउने गर्दछन् । तर, कोरोना महामारी सुरु भएयता भने अवस्था फेरिएको छ । गत वर्ष ९ महिना बन्द भएर खुलेका सिनेमा हल कोरोना महामारीको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै तीन महिनामै बन्द भयो ।
पछिल्लो समय संक्रमण दर कम हुँदै गएपछि सरकारले गत हप्ता स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर ५० प्रतिशत अकुपेन्सीमा तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका सिनेमा हल सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ । तर, हल भने अझै खुलेका छैनन् । हल नखुल्दा दशैंमा नयाँ चलचित्र रिलिज हुने विषयमा पनि अन्योल देखिएको छ ।
फिल्म वितरक तथा हल व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल चलचित्र संघले शतप्रतिशत अकुपेन्सीसहित देशैभरका सिनेमा हल खोल्न सरकारले अनुमति नदिएसम्म तीन जिल्लाका मात्र हल नखोल्ने निर्णय गरेको छ । जसले गर्दा नजिकिँदै गरेको दशैंमा पनि सिनेमा हल नखुल्ने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ । किनकि, फिल्म रिलिजका लागि दशैं बिदा सबैभन्दा राम्रो मानिन्छन् ।
सरकारले देशैभरका सिनेमा हल खोल्न अनुमति दिएपछि दशैं–तिहार वा त्यसपछि कुन फिल्म रिलिज गर्ने भन्ने विषयमा चलचित्र संघले यतिबेला विभिन्न फिल्मका निर्मातासँग छलफल गरिरहेको छ । महिनामा दुई वटा मात्रै नेपाली फिल्म रिलिज गर्ने र विदेशी फिल्मसँग नजुधाउने गरी ‘म यस्तो गीत गाउँछु २’ र तिहारमा ‘चपली हाइट ३’ रिलिज गर्ने तयारीमा चलचित्र संघ छ । ‘चपली हाइट ३’ का निर्माता अर्ज‘न कुमारले तिहारमा फिल्म रिलिजका लागि चलचित्र संघसँग निरन्तर छलफल भइरहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘फिल्म कहिले लगाउने भनेर चलचित्र संघलाई निर्णय गर्ने जिम्मा दिएका छौँ । संघले जहिले भन्छ त्यही दिन फिल्म रिलिज हुन्छ । त्यसका लागि हामीले केही ‘एमजी’ डिमान्ड गरेका छौँ त्यो पूरा भयो भने फिल्म रिलिज गर्ने जोखिम उठाउँछौँ ।’
कोरोनाका कारण लामो समय सिनेमा हल बन्द हुँदा निर्माण सकिएका दर्जनौं फिल्ममाथि भएको अर्बौंको लगानी फ्रिज भएको छ । सरकारले हल खोल्न अनुमति दिएपछि गत हप्ता ‘ए मेरो हजुर ४’ ले चैत २५ गते र ‘लप्पन छप्पन २’ ले फागुन १३ गतेलाई रिलिज डेट घोषणा गरेको छ । तर, तत्काल फिल्म रिलिज गर्न निर्माताहरू वितरक र हल व्यवसायीबाट राम्रो ‘एमजी’ को आसमा बसेका छन् ।
Published On: Wednesday, September 15, 2021 Time : 3:18:47